कांग्रेस सभापतीको चुनावमा उथलपुथल, निधि र सिंहले गरे शेखरलाई नै समर्थन ! – Points Nepal
कांग्रेस सभापतीको चुनावमा उथलपुथल, निधि र सिंहले गरे शेखरलाई नै समर्थन !
प्रकाशित मिति: सोमबार, मंसिर २७, २०७८ समय: ७:३८:१५
काठमाडौँ — सभापतीको चुनावमा उथलपुथलको संकेत देखिएको छ । देउवालाई हराउन सबै एक ठाउँमा उभिने दाबी गरिएको हो । नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनमा सभापतिका उम्मेदवार विमलेन्द्र निधिले सोमबार हुने पार्टीको चुनावमा कसैले पनि जित्न नसक्ने दाबी गरेका हुन् ।
कांग्रेस महाधिवेशनस्थल भृकुटीमण्डपमा आइतबार पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै सभापतिका उम्मेदवार निधिले दोस्रो चरणको चुनाबमा शेरबहादुर देउवा इतर समूहले जित्ने बताए।
दोस्रो चरणको चुनाबमा आफू, शेखर कोइराला र प्रकाशमान सिंह एकै ठाउँमा उभिएर नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने जानकारी दिए। नेपाली कांग्रेसका बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई सभापतिमा निर्बिरोध प्रस्ताब गरेको भए पार्टीको तल्लो तहमा नयाँ सन्देश जाने उनको भनाई थियो ।
देउवाको नेतृत्वमा पौडेललाई अलग्याउने कोशिस भएको निधिले उल्लेख गरे। उनले सहमतिका लागि निर्वाचन कार्यक्रम एक दुई दिन स्थगित गरेर अझै पनि पौडेलको नाममा सहमति गर्न सकिने ठाउँ रहेको बताए।
कांग्रेस महाधिवेशनपछि सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुने निधिले बताए। त्यतिबेला कांग्रेसभित्रबाट वा पाँच दलको कुनै नेता प्रधानमन्त्री हुने उनको भनाई थियो।
यता नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्यका लागि ४९१ जना चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । काठमाडौंमा जारी १४औँ महाधिवेशनमा नयाँ केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्यका लागि ४९१ जना चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका हुन् ।
सभापतिका प्रत्यासी युवराज न्यौपाने, सहमहामन्त्रीका प्रत्यासी ९थारुतर्फ० सुरेन्द्रप्रसाद चौधरी र ५५ जना विभिन्न कलस्टरका सदस्यका प्रत्यासीले मनोनयन फिर्ता लिएका छन् ।
Last Updated on: December 13th, 2021 at 7:38 am